Ala - PADAP
Ampahany lehibe amin’ireo laharam-pahamehana amin’ny tetikasa PADAP ny fanamafisana ny sisin-kavoana ary koa ny famerenana amin’ny laoniny ny tontolon’ny ala. 14,4 tapitrisa dolara dia natokana ho an’ireo hetsika mifandraika amin’izany.
Ny fitrandrahana sy fitantanana ny ala eo anivon’ny tetikasa PADAP
Raha atotaly dia 6000 hektara ny tany sy ny toerana isan’ambaratongany haorina amin’ireo sehatr’asa dimy voafantina ao anatin’ny tetikasa PADAP. Ireo fanorenana dia hotanterahin’ny orinasa manokana miasa ao anaty fifanarahana, na amin’ny alàlan’ny fandaharam-bola ho an’ny asa sy miankina amin’ny fahasarotan’ny asa takiana.
Mikasika ny famerenana amin’ny laoniny ny tontolon’ny ala, ny hetsika PADAP dia mifantoka amin’ny fiarovana ny « berges ». Ny tanjona dia ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny vondrom-piarahamonina sy ny tompon’andraikitra eo an-toerana amin’ireo faritra, mba ho fanatsarana ny fifandraisana eo amin’ny tontolo iainana sy ny fomba fiasa hidrôlôjika amin’ny tontolo. Amin’ny ankapobeny, ny tetikasa PADAP dia mikendry ny fandrindrana ireo lavaka mirefy 500 hektara amin’ny fitoeran-drano hydrografika sasany any Andapa, Soanierana Ivongo, Iazafo, Bealanana ary Marovoay.
Fampiroboroboana ny fanatsarana ny tahan’ny ala
Ny tetikasa PADAP dia mamporisika manokana ny fampiharana ny “agroforesterie”. Ny tombony an’ity tetikasa ity dia miankina amin’ny fahafahany mampiroborobo ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny famokarana vokatra.
Ny fampidirana fomba hisorohana sy hamerana ny fikaohon-tany ary hanatsarana ny famokarana ny tany dia tafiditra ao anatin’ny hetsika hatao ao anatin’ny tetikasa PADAP. Tsy izany ihany, fa miasa mba hampivelatra ny “tampons riverains” ireo mpandray anjara. Izy ireo koa dia manampy amin’ny fiarovana ireo morona ary koa ny lakandrano sy ny fifangaroana.
Ny fambolen-kazo dia hahazoana tombotsoa maro
Mba hiarovana ny “berges”, ny tetikasa PADAP dia mampiroborobo ny fambolena karazan-kazo isan-karazany amin’ireo vondrom-piarahamonina izay mipetraka amin’ny faritra marefo indrindra amin’ireo faritra dimy voafantina. Ity hetsika ity dia tokony handrakotra velaran-tany 1.500 hektara any amin’ny tanàna 37 ao amin’ny faritra SAVA, Analanjirofo, Sofia ary Boeny. Homena fitaovana sy zana-kazo hovolena ireo mpandray anjara.
Fanampin’izay, ireo mpanentana ny tetikasa PADAP dia nahita fomba hanentanana ireo mpiasa madinika mba hamboly ala indray, indrindra ireo any amin’ireo fantsakan-drano manodidina ny faritra misy rano. Anisan’izany ireo tantsaha manome lanjany ny hazo tsirairay izay nambolena tao amin’ny tany feno ala. Ao anatin’ny fandaharam-bola ho an’ny hazo sy fomba fiasa koa dia kendrena ny ananan’ny tsirairay tanjona mba hifehezana ny fikaohon-tany sy ny fiarovana ny fiaraha-monina amin’ireo vondrom-piarahamonina mahantra indrindra.
Araka ny taratasy fanamarinana ny tany dia 50% no homena amin’ny taona voalohany izay mifototra amin’ny isan’ireo hazo velona nambolena tamin’ilay toerana . Ny 50% ambiny dia homena amin’ny taona manaraka araka ny isan’ireo hazo novolena voarakitra. Araka ny fanentanana dia hiovaova arakaraka ny toerana ny tetibola amin’izany. Izy io dia hapetraka araka ny karama isan’andron’ireo olona isam-paritra.
Ny fandaharam-bola natokana ho an’ny hazo dia hafindran’ny mpamatsy eo amina vondrona fikambanana na amin’ireo fikambanana tsy miankina amin’ny Fanjakana (ONG) manam-pahaizana manokana amin’ilay sehatra.